5 Minamato Yemunamato Yemurume Anoshinha | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato 5 Minyengetero Yemunamato Yemurume Anofeva
5 Minyengetero Yemunamato Yemurume Anofeva
Nhasi tichange tichishanda nemunamato zvibodzwa zvemurume anoita hupombwe. Upombwe chitadzo chikuru pamberi paMwari. Bhaibheri rakanyorwa mubhuku raEksodho 20:14 Usaita upombwe. Uyu ndiwo mumwe wemirairo yakapihwa Mosesi naMwari. Mwari vakaraira Mosesi kuti audze vanhu kuti kurega kubva kuUpombwe. Iko kunogara kune chirango chevanhu vakapinda muhupombwe.
Hupombwe chimwe chezvivi zvakakura pamberi paMwari. Bhuku raVahebheru 13:14 Muchato ngauitwe mukuremekedzwa pakati pevose uye mubhedha wewanano ngauve usina kusvibiswa, nekuti Mwari achatonga mhombwe nevanoita upombwe. Mwari achatonga zvifeve nemhombwe. Ngatimbofungai nezveupenyu hwaMambo Dhavhidhi. Dambudziko rakatangira mambo mukuru weIsreal paakavata nemukadzi wemuranda wake, uye mbeu yakagamuchirwa kubva muhupombwe. David haana kungomira ipapo. Akaenderera mberi nekuronga zano rinozotora Uriya kuti ave naBhatishebha.
Iye, zvakadaro, haana kuziva kuti Mwari anorega zvakaipa, uye Ane nzira yekuranga zvakaipa zvevanhu. Bhatishebha akasununguka, uye mwana akafa. Mbeu yakaipa yakabviswa. Izvi zvinotsanangudza kwatiri kuti hapana chakanaka chinobuda muhupombwe.
3 Zvikonzero Unofanira Kunamatira Kune Wako Anopomba Murume
Haufanire kuramba uchirwa nemurume wako anoita upombwe. Kurwa kana kumurevera kuvanhu vashoma izvo zvinhu hazvimushandure kubva pachiitiko ichocho. Uye kana hanya ikasatorwa, atova munzira yekutongwa. Zvakakosha kunamatira murume wako nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
Imi vaviri muri vamwe
Genesisi 2:24: "Naizvozvo murume achasiya baba vake namai vake, anamatire mukadzi wake, vave nyama imwe."
Kunyangwe ari murume wako ari kuita chiito chekunyengera ichi, zvakadaro, mhedzisiro yezviito zvake haisi yake iye ega anotakura. Iko kune yemhando yemhando yechisungo iyo inowana simba kana murume nemukadzi varoora. Icho chibvumirano chehumwe, chibvumirano chekubatana. Chero chii chinoitika kwaari chinokukanganisa zvakananga kana zvisina kunangana, uye hazviperi ipapo; zvinokanganisa zvakanyanya vana.
VaRoma 13: 8: Usava nechikwereti nemunhu, kunze kwekudanana, nekuti uyo anoda mumwe wazadzisa murairo.
Chimwe chikonzero iwe unofanirwa kunamatira murume wako anoita hupombwe ndechekuti unomuda. Zvisinei negomba rakakandwa naDhiabhori, achiri murume wako, uye imi muri vaviri muri pamwe chete. Rudo runokunda kutonga. Iyo inogara ichitungamira pamusoro pehasha kana kutsiva.
Zuva raunobvuma kuve mukadzi wake, iwe wakabvuma kuve murevereri wake. Iwe hautarisirwe kukanda mapfumo pasi paari. Namatira iye nekuti unomuda.
Mhedzisiro yacho inozokanganisa vana vako
Hupombwe ndeimwe yeanokurumidza kuputsa dzimba. Kana imba yaputsika, inokanganisa vana. Kana iwe uchibvumira dhiabhori kuti aparadze imba yako, vana vako vachatambura nhamo yemhuri yakaputsika. Unofanirwa kutora mhuri yako kubva mumaoko adhiabhori. Ibasa rako kusabvumira muvengi kuti aputse imba yako; zvikasadaro, vana vako vachatambura nazvo.
Kune izvi, isu tichave tichipa minyengetero mapoinzi emurume anoita upombwe. Ishe achaunza kumba kwako murume, uye iye achange asununguka kubva pabonde.
Ishe, ndinoziva kuti murume wangu anga achiita zvakavanzika nevamwe vakadzi, uye izvi zvakakonzera moyo wakaputsika kwandiri. Mwari ane nyasha, ndinokukumbira kuti ugadzirise moyo wangu wakaputsika uye undipe nyasha dzekusarega paari. Ini ndinoramba kubvumira dhiabhori kuti akunde mweya wake. Ndinonamata kuti iwe umukonzere kuti ave nekuratidzwa kwemhedzisiro yezvaakaita. Ndinonamata kuti mweya wako mutsvene unomutsa muviri unofa umupe simba rekukunda miyedzo yehupombwe muzita raJesu.
Baba vetsitsi, izwi renyu rinoti uyo anowana mukadzi awane chinhu chakanaka uye awane nyasha kubva kuna Mwari. Ndinonamata kuti simba renyu ribatsire kuunza murume wangu kumba. Ndinokumbira kuti simba reWill yako rimuendese kumba kuti awane nyasha kubva kwauri. Mweya waMwari, ndinokumbira kuti utonge sungano inofadza yaive pakati pemurume wangu neni pazuva ratakabatanidzwa pamwe chete. Ndinokumbira kuti iwe umubatsire kuzadzikisa mhiko dzake muzita raJesu.
Ishe, sekusungana kwamakaita isu kuti muve muviri mumwe, ndinopa munamato zvichibva pasungano iyoyo. Ini ndinokumbira kuti iwe urege kutendera murume wangu kuti azorore, kubvisa hope kubva mumaziso ake neumwe wake asina hunhu shamwari. Kusvikira achinja uye adzoka kumba, usamurega ave nerunyararo rwepfungwa. Ndinotema kuti kusagadzikana kukuru kuchauya paari. Kusvikira adzoka kupfungwa uye odzoka kumba kuhafu yake iri nani, ngaarege kuva nerugare rwepfungwa. Izvi ndinokumbira muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti Mwari vapindire mune iyi nyaya inonetsa rugare rwemuchato wangu. Chinyorwa chinotaura zvakabatanidzwa naIshe; ngaparege kuva nomunhu anoparadzanisa. Ini ndinoramba kukotamira kumarwadzo nekushungurudzika kwemoyo kunokonzerwa nemurume asina kutendeka. Ndinokumbira kuti mupindire mune iyi nyaya muuye nemurume wangu wandinyoresa kumba. Ndinokumbira nyasha dzekumuregerera kana adzoka.
Ishe, ndinouya kuzopesana nedhimoni rese rinopesana nekubatana kwedu semurume nemukadzi. Ndinotsiura simba remuvengi pamusoro pemubatanidzwa uyu nhasi muzita raJesu. Ndinoraira rusununguko kumurume wangu kubva pasimba rehupombwe rakatora pamusoro iye. Ndinokumbira kuti nemvumo yedenga, akasununguka nhasi muzita raJesu.
Previous nyaya12 Yekunamata Points YeRusununguko
inoteveraMinamato Yevabereki Uye Vana
Munamato Kumirisana nematambudziko
Mavhesi eBhaibheri Nezvekukunda
30 Chishamiso minamato Pfungwa Pamusoro pezvingaitika Zvinetso
20 minamato Pfungwa dzeMukati Runyararo Mukuvhiringidzika